2541 Sqft - Office Room for RENT in TIME CITY Office Tower.
2541 Sqft – Office Room for RENT in TIME CITY Office Tower.
အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား: ရုံးခန်း နှင့် ဆိုင်ခန်းများ
Property ID: 53793
Property size: 2041 Sqft
1 Sqft Rental Fees:2USD/ month
Located in the Yangon Financial District
PSTN Phone line providing, High speed internet connection access, Toilet with Basin and Electrical provision is perfectibility to all concerned rooms, 24 Hrs Security, CCTV, 220V Converter Transformer and Standby 100% Generator Backup(USA/UK)
-Commercial Area (G-Floor To 4th Floor related with Jewelry at 5th floor)
-High Speed Elevator (Eight Lifts) with UPS and Card Access System
-Three Laminated And Insulated Layers Glass With Low-E (Energy Saving/ Soundproof System)
-Elevators Capacity (17 Persons Of A Lift)
-Fiber Internet, CATV
-Indoor Mobile Signal Coverage
-Fire Control System, Sprinklers and Speakers
-All Marble for Public Areas
Online တင်ခဲ့သည့်နေ့ ဇန်နဝါရီ 8, 2021
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည့်နေ့ ဇန်နဝါရီ 8, 2021
ကမာရွတ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် သင့်တော်သော ‌35 x 70 အကျယ် မြေညီထပ် အမြန်ငှားမည်။
35 သိန်း MMK /month
ကမာရွတ် ရန်ကုန်- အင်းစိန် လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန် သင့်‌တော်သော 25 x 50 အကျယ်4RC ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် အမြန်ငှားမည်။
ကမာရွတ် ရန်ကုန်- အင်းစိန် လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ 25 x 50 အကျယ် မြေညီထပ် အမြန်ငှားမည်။
30 သိန်း MMK /month
0.25 Acres with 1.5 RC for RENT in Inya Road, Kamaryut Tsp.
1500 Sqft - Office Room for RENT in TIME CITY Office Tower.
ကမာရွတ် လှည်းတန်းရှိ ရုံးခန်း/ သင်တန်းကျောင်းဖွင့်ရန် သင့်တော်သော 20 x 40 အကျယ် 3.5 RC အိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ငှားမည်။
27 သိန်း MMK /month